U guur Degmada Östersund - Östersund.se
/ U guur Degmada Östersund
Waqti badan oo aad ku noolaatid. Gudaha Östersund waxaad ogaaneysaa in wax walba ay gacanta u dhowyihiin. Waxay la micna tahay inaad heli kartid waqti badan. Danahaaga gaarka ah iyo qoyska iyo saaxibada. Waad wareegi kartaa ama lugeyn kartaa, dhoor daqiiqo ee dugsiga aad joogtid, dugsiga barbaarinta – ama ka baxsan baadiyaha.
Marka aad ku nooshahay halkaan uma baahnid inaad fasax aadid si aad u soo aragtid nolosha banaanka dhabta ah ama aad ku raaxeysatid dunida buurta. Wax badan ee Östersund waxay ka koobanyihiin agagaarka banaanka nolosha firfircoon, oo sannadka oo dhan. Laakin waxaa sidoo kale jiro dano diiran halkaan ee nolosha dhaqanka iyo kooxyada iyo ururada. Intaa waxaa dheer, Östersund waa caasimad hormarineyso aaminaad weyn ee mustaqbalka iyo degmooyinka kale ee soo baxayo.
Shaqooyinka Degmada Östersund
Ma jeclaan laheyn inaad ka shaqeysid Degmada Östersund? Waxaan si joogta ah u raadinaa shaqaale cusub ee leh shaqooyin kala duwan.
Fiiri dhammaan shaqooyinka banaan ee Degmada Östersund (ii Swedish)
Caawinta lagu helo shaqo
Arbetsförmedlingen (Hay’ada Shaqada Bulshada Swedish) waa maamulka masuulka ka ah inay kugu caawiyaan shaqo helida.
Booqo websaydka Arbetsförmedlingen (oo lagu heli karo dhoor luuqadood)
Hel guriga ee degmada Östersund
Waxaa jiro dooqyo badan ee laga heli karo Degmada Östersund–, ee bartamaha caasimada oo leh muuqaalada buuraha iyo haro, ama laga yaabo qaab kale ee wareegsan, ee ku nool baadiyaha ee leh muuqaalka caasimada. Waad kireysan kartaa, iibsan kartaa ama dhisan kartaa gurigaaga aad ku riyootid.
Dhoor aagag ee guryaha cusub ayaa ka soo baxayo Östersund oo waxaa sidoo kale jiro dhoor meelood ee degmada ee bixiso guryo badan oo baadiyaha ah.
Haddii aad jeclaan laheyd inaad kireysato guri, waxaad dooran kartaa inta u dhaxeyso tirada milkiilayaasha guriga. Halkaan waa liiska ugu weyn.
U hel guri qaab kale
Waxaa jiro adeegyada guryaha kala duwan ee onleenka ah oo caawin noqon karo haddii aad rabtid inaad ka heshid guri Degmada Östersund. Halkaan waa qaar iyaga ka mid ah:
Blocket.se (oo Swedish)
Kvalster.se (oo Swedish)
Nybyggen.se (oo Swedish)
Hyrabostad.se (oo Swedish)
Waxaa sidoo kale jiro, tusaale ahaan, kooxyada Facebook ee dad badan u isticmaalaan inay kireeyaan ama ka helaan guri Degmada Östersund iyo Jämtland. Koox noocaas ah waa ”Kakas bostadsförmedling i Jämtland!”.
Kuwa halkaan u imaaday sida qaxooti
Haddii aad u timid Sweden sida qaxooti iyo, kadib markaad heshay ruqsada daganaanshaha, daganeyd Östersund ama dooratay inaad dagtid Östersund nafsadaada, waxaad caawin ka heleysaa Adeega Isdhaxgalka inta lagu jiro waqtigaaga hore ee halkaan. Adeega Isdhaxgalka wuxuu ku yaalaa Kyrkgatan 49 ee bartamaha Östersund iyo way furanyihiin Siniinaha, Arbacooyinka iyo Jimcooyinka, 10:00 -14:30.
Adeega Isdhaxgalka wuxuu qeyb ka yahay Degmada Östersund oo waxay shaqadooda tahay inay siiso dadka dhawaan soo galay xaalada ay ku qancaan ee isdhaxgalka. Waxay la xiriirtaa sare u qaadida fahamka, iyo ka qeybqaadashada, bulshada Swedish. Si wadajir ah ula jiro hay’adaha kale, Adeega Isdhaxgalka sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa inuu xoojiyo shaqadaada iyo waxbarashada imaan karto, iyo si ay kuugu suurtogeliso inaad is taageertid.
Ujeedadeena muddada dheer waa mida aad ku barwaaqoobeysid degmada oo aad rabeysid inaad halkaan nala joogtid.
Joojinta Adeega Isdhaxgalka oo kooban
Guriga ugu horeeyo
Kuwa helay ruqsada daganaanshaha oo daganaa Degmada Östersund waxay helayaan caawin lagu helayo gurigooda ugu horeeyay.
Taageerada wax ku oolka ah ee la xiriiro soo dhaweynta iyo u diyaarinta guri
Waxaan siinaa taageero, adeeg iyo warbixinta ee qaxootiga markaas yimid Östersund.
Ujeedada jaheynta bu;shada waa siinta fahamka aasaaska bulshada Swedish oo waxaan ku bixinaa midaan luuqadaada hooyo ama luuqad kale ee aad u leedahay faham wanaagsan.
Barnaamijyada sare loogu qaadayo isdhaxgalka
Ladies Villa – kaashanayo Red Cross kuwaas oo bixiyo meel kulan furan ee haweenka ajaanibka, oo ay ku jiraan carruurtooda, iyo tababarka luuqada, warbixinta iyo noocyada kala duwan ee howlaha.